ရသစုံစာအုပ်အညွှန်း "ဒါဗင်ချီကုဒ်"၊ "မြသေလာတောင် ဆွေးဖွယ်နှောင်သည်" - YOYARLAY Digital Media and News
Published: February 17, 20188:28 am Updated: August 14, 20199:34 am
စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဟာ ဘယ်အချိန်ဖတ်ဖတ် မရိုးနိုင်တဲ့ စာအုပ်ပါ။ ခေတ်တိုင်း၊ အခြေအနေတိုင်းနဲ့ လိုက်ဖက်ညီပြီး ကိုယ့်အတွက် အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်စေတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ကိုယ့်အတွက် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ပါပဲ။
စာဖတ်ခြင်းဟာ ဦးနှောက်ကို အစာကျွေးရာ ရောက်သလို နှလုံးသားအတွက် အာဟာရလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာအုပ်ကောင်းတွေကို ရွေးချယ်ဖတ်ရှုဖို့လိုပါတယ်။ အသက်အရွယ်အလိုက် ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်တွေလည်း မတူသလို နှစ်သက်မှုအလိုက် ဖတ်ရှုချင်တဲ့ စာအုပ်တွေလည်း မတူကြပါဘူး။ အချို့လူတွေက ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ တွေကိုပဲ မက်မက်မောမော ဖတ်သလို အချို့လူတွေကတော့ ရသစာအုပ်လေးတွေကို တရှိုက်မက်မက်ဖတ်တတ်ကြပါတယ်။ အချို့လူတွေကလည်း သုတရနိုင်မယ့် စာအုပ်တွေကိုသာ ရွေးချယ်တတ်သလို အချို့လူတွေကတော့ စိတ်အပန်းပြေစေမယ့် စာအုပ်မျိုးတွေကိုမှ ရှာဖွေလေ့ရှိပါတယ်။ ဘယ်လို စာအုပ်ကိုပဲ ရွေးချယ်ကြသည်ဖြစ်စေ၊ စာဖတ်ခြင်းကနေ ကိုယ့်အတွက် ခံစားမှု တစ်ခုခုကို ရရှိခြင်းက အမြတ်ပါပဲ။ ဒါဆို ဒီတစ်ပတ်အတွက် ဖတ်စရာ ဘယ်စာအုပ်လေးတွေကို ရိုးရာလေးက ညွှန်းပေးထားမလဲ ကြည့်ကြရအောင်… ။
၁။ ဒါဗင်ချီကုဒ် (ဥာဏ်သစ်)
ဒီစာအုပ်ကိုတော့ လူတော်တော်များများ သိကြမှာပါ။ စာအုပ်ကို မသိရင်တောင် မင်းသားကြီး Tom Hanks ရိုက်ကူးထားတဲ့ Davinci Code ဇာတ်ကားကိုတော့ သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို မူရင်းရေးသားသူကတော့ Dan Brown ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြန်ကတော့ ဆရာဥာဏ်သစ်ပါ။ ရုပ်ရှင်သည်လည်း ရုပ်ရှင်အလျောက် ကောင်းမွန်ပေမယ့် စာအုပ်ကတော့ ပိုပြည့်စုံတတ်ကြတာ ထုံးစံပါပဲ။ ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ စာအုပ်ကို သေချာ နားလည်အောင် ဖတ်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Christianity နဲ့ Leonado Davinci အကြောင်း အနည်းငယ် သဘောပေါက်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီလို့ ဆိုရင်တော့လည်း သူ့ရဲ့ ဂန္ထဝင်ပန်းချီကားတွေဖြစ်တဲ့ မိုနာလီဇာပန်းချီကား၊ နောက်ဆုံးညစာ ပန်းချီကား စတာတွေကို မျက်စိထဲ မြင်လာလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ (အနည်းဆုံးတော့ မိုနာလီဇာပေါ့)။
ဒါဗင်ချီက စာလုံးတွေကို ပြောင်းပြန်ရေးတာတွေ၊ သူ့ပန်းချီကားတွေထဲမှာ စာတွေပါနေတာတွေနဲ့အတူ သာမန် ပန်းချီဆရာတစ်ယောက် မဟုတ်ဘဲ အရာရာတိုင်းလိုလိုမှာ ထူးချွန်တဲ့သူ ဖြစ်နေတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်စေတာပါ။ ဥပမာ- သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးညစာ ပန်းချီကားထဲက ပေါင်မုန့်တွေကို သူဆွဲထားတဲ့ နေရာအတိုင်း ဂီတနုတ်စ်ပေါ်မှာ နေရာချလိုက်ရင် သံစဉ်တစ်ခု ထွက်လာတယ်လို့ ဆိုကြတာမျိုးတွေ၊ မိုနာလီဇာ ပန်းချီကားဟာ ဘယ်သူ့ကို ကြည့်ပြီးရေးဆွဲထားတာမှန်း မသိနိုင်တာတွေ၊ စသဖြင့် အမျိုးမျိုးပါပဲ… ဒီပန်းချီကားတွေနဲ့ ဒါဗင်ချီရဲ့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုအပေါ် မူတည်လို့ Dan Brown က Davinci Code ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုကို ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ စထွက်ကတည်းက ဝေဖန်မှုပေါင်း မြောက်များစွာ၊ ကဲ့ရဲ့ အပြစ်တင်မှုပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ ဒီစာအုပ်က ဂန္ထဝင်တွင်ခဲ့တာပါ။ ရုပ်ရှင်အဖြစ် ပြန်လည်ရိုက်ကူးရာမှာလည်း ဝေဖန်သံများစွာထဲက အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့….။
Holy Grail ဆိုတာ တကယ်ပဲ ခရစ်တော်နောက်ဆုံးသောက်ခဲ့တဲ့ ဝိုင်ခွက်ကို ပြောတာလား။ ဒီလိုသာ အမှန်ဆိုရင် ဘာကြောင့်များ King Arthur ရဲ့ သူရဲကောင်းတွေက တကူးတက ကာကွယ်ပေးနေရတာလဲ။ အုပ်ကိစ္စနဲ့ ပြင်သစ်ကို ရောက်လာတဲ့ စာရေးဆရာ တစ်ဖြစ်လဲ သင်္ကေတကျွမ်းကျင်သူ ရောဘတ်လန်ဒန်က လူသတ်မှုတစ်ခုကို သူလုပ်ပါတယ်ရယ်လို့ စွပ်စွဲခံရရာက ဖြေရှင်းရင်း ဘုမသိဘမသိနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးရဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံး လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုထဲကို ထဲထဲဝင်ဝင် ပတ်သက်မိလျက်သားဖြစ်သွားတဲ့အခါ…. ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ။ ဒါဗင်ချီရဲ့ ကုဒ်တွေက ဘာတွေလဲ။ နာမည်ကျော် သိပ္ပံပညာရှင် နယူတန်တို့ကရော ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ဒီအရှုပ်အထွေးတွေထဲ ပါဝင်လာတာလဲ။ စတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ပေါင်းများစွာကို စိတ်ဝင်စားစရာ ဖတ်ရှုရမှာပါ။ တကယ်လို့များ အင်္ဂလိပ်စာကို နိုင်နင်းတယ်ဆိုခဲ့ရင် မူရင်းဝတ္ထုကို ရှာဖတ်ပါ။ အင်္ဂလိပ်စာ အနည်းငယ် အားနည်းတယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာ ဥာဏ်သစ် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ဒါဗင်ချီကုဒ် ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုသာ ဝယ်ဖတ်ပါ။ ဆရာ့ရဲ့ ရှင်းလင်းတဲ့ အရေးအသားနဲ့ ထိမိတဲ့ ဘာသာပြန်ဆိုမှုတွေက မူရင်းအရသာ မပျက်စေဘဲ ဝတ္ထုရဲ့ အနှစ်သာရတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ချပြသွားနိုင်တာကြောင့် ဖတ်ကိုဖတ်ရှုသင့်တဲ့ ဘာသာပြန် စာအုပ် တစ်အုပ်ဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။
၂။ မြသေလာတောင် ဆွေးဖွယ်နှောင်သည် (မဝင်းမြင့်)
ဒီစာအုပ်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာက အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။ ဒီစာအုပ်ကလည်း အောင်မြင်ခဲ့ချိန်တုန်းက မှီငြမ်းရေးတယ်လို့ စွပ်စွဲမှုပေါင်းများစွာ ရှိခဲ့ပေမယ့် စာရေးဆရာမကတော့ သက်သေ အခိုင်အလုံနဲ့ သူကိုယ်တိုင်ရေးဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ရတဲ့ စာအုပ်ပါ။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်ရာကျော် မြန်မာဘုရင်တို့ ခေတ်က တပ်မှူးတစ်ယောက်ဟာ စစ်တိုက်ရင်း ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန်ရရင်းကနေ သေပြီရယ်လို့ ပစ်ထားကြတဲ့အခါမှာ ကရင်အဘိုးကြီးတစ်စုက ကယ်တင်ခဲ့ရာကနေ ရိုးမထဲမှာ ဇာတ်မြှုပ်နေတဲ့ ရှေးကျတဲ့ လူမျိုးစုတစ်စုနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလူမျိုးစုပြောတဲ့ ကရင်စကားကို ဘယ်ကရင်ကမှ နားမလည်သလို ဒီလူမျိုးစု ရှိနေကြောင်းကိုလည်း ဘယ်သူမှ မသိခဲ့ပါဘူး။ ထူးဆန်းတဲ့ အဘိုးကြီးတွေ ဈေးလာဝယ်တယ်ရယ်လို့ပဲ သိထားကြတာပါ။ ဒီလူမျိုးစုမှာ ထူးခြားတာကတော့ ယောက်ျား မိန်းမ ကလေးကစလို့ အားလုံးဟာ ကတုံးနဲ့ဖြစ်သလို ဖြူဖပ်ဖြူလျော် အသားအရေနဲ့ ထူးခြားနေကြတာပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်ကြပြီး သူတို့ကို ဘုရင်မတစ်ယောက်က အုပ်ချုပ်ပါတယ်။ အစဉ်အဆက် အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ဘုရင်မတိုင်းရဲ့ နာမည်က တစ်ခုတည်းပါပဲ။ နန့်နှောင်းခါရီ လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီဘုရင်မဟာ သိပ်ချော၊ သိပ်လှပြီး ဆံပင်တံခေါက်ခွက်ထိအရှည်နဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လှပ ကျက်သရေ ရှိခြင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ အနည်းဆုံး အသက် ၈ဝထိ နေထိုင်သွားတာတောင် ၁၈နှစ်အရွယ် ရုပ်ရည်အတိုင်းသာ ရှိပြီး သေဆုံးသွားသည့်တိုင် ဘုရင်မ ရုပ်ကလပ်ကို ကျောက်ခေါင်းတလားထဲမှာ ပုံမပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းထားတတ်ကြတဲ့ လူမျိုးစုဆီကို ရောက်သွားတဲ့ တပ်မှူး ဘယ်လို အဖြစ်မျိုးတွေနဲ့ နေရပ်ကို ပြန်ရောက်လာမလဲ။ ဒီရေစက်က တပ်မှူးနဲ့တင် မပြတ်ဘဲ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ဒီနေရာကို ရောက်အောင် သွားဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့အခါ…. မဖြစ်ဖြစ်အောင် သွားမယ်လို့ ရည်ရွယ်လိုက်ပေမယ့် ခေါ်သွားတဲ့ အပေါင်းအသင်းက သစ္စာဖောက်ပြီး မတော်လောဘနဲ့ မြရတနာတွေ ခိုးယူဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ…. ဒီဝဋ်ကြွေး ဒီမှာတင် ပြီးပြီလား? မပြီးသေးပါဘူး။ နောက်ထပ် မျိုးဆက်တစ်ဆက်မှာလည်း ဖခင် လူယုတ်မာကြီး တင်ခဲ့တဲ့ အကြွေးကို ဆပ်ဖို့ သားဖြစ်သူက ကြိုးစားခဲ့တဲ့အခါမှာ ဘယ်လို အဖြစ်မျိုးတွေနဲ့ ကြုံရဦးမှာလဲ။ သူတို့အလှည့်မှာရော အောင်မြင်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာတွေကို ရင်သပ်ရှုမော အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင် ဖတ်ရှုရမှာမို့ ဒါကိုလည်း ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ရယ်လို့ ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်။ စာဖတ်ခြင်းဖြင့် နှလုံးသား အာဟာရတွေ ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။
Previous Previous post: ထောင်ဝင်စာလာတွေ့တဲ့ အမြွာအကိုကို လူစားလဲပြီး ထောင်မှ ထွက်ပြေး
Next Next post: ကလေးငယ်လေးများ ဘေးကင်းနေစေဖို့ မေမေတို့သိထားသင့်တဲ့ ရှောင်ရန်အချက်လေးများ
လူငယ်တွေအနေနဲ့ နိုင်ငံခြား၌ကျောင်းတက်ခွင့် ရရှိဖို့ကတော့အိမ်မက်တစ်ခုပါပဲ။ ပြည်ပသို့ ပညာ သင်ကြားခွင့်ရရှိသူ အများစုကတော့ ငွေကြေး တတ်နိုင် (သို့) ပညာသင်ဆု ရရှိထားတဲ့ကျောင်းသား တွေဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြား၌ကျောင်း တက်ရာတွင် လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိအနေနဲ့ ရေမြေမတူတဲ့နေရာ သို့…